Amaqhinga okukhawuleza kunye nama-Easy to Teach Your Kids Math
Iindlela ezilula zokufundisa abantwana iMathematika
Ukufundisa izibalo kubantwana bakho kulula nje ngo-1 + 1 = 2. Hamba ngaphaya kwepenisi kunye nephepha ukuze wenze ama-math amava okufunda ehlekisa wena kunye nezingane zakho. Ezi zicwangciso ezikhawulezayo nezilula zikunceda ukuba ufundise abantwana bakho izibalo kwaye uya kubaguqulela zibe ngabafundi beemathematika.
1. Qala Ngokubala
Ukufundisa izibalo kukuqala nomntwana wakho owazi iinombolo zakhe. Ungamnceda ukuba afunde ukubala ngezicwangciso ezifanayo oza kusebenzisa ukufundisa izibalo zakhe.
Uyakwazi ukuphendula ngokubhetele ukukhumbula iinombolo oziphindayo okanye unokuthatha amanani akhe ngokukubona ubala izinto ukusuka kwi-1-10. Indlela eya kusebenza enye yabantwana bakho ingenakulungela enye. Ukumisa ngamnye umntwana ngabanye.
Xa sele eqala ukubala, ulungele ukuqala ngeemigaqo ethile yezibalo. Uya kufaka kwaye akhuphe ngaphambi kokuba wazi.
2. Sebenzisa Izinto Zemihla ngemihla
Unayo yonke into oyifunayo ukuqala ukufundisa izibalo kumntwana wakho. Amaqhosha, ipeneni, imali, iincwadi, iziqhamo, isobho, imithi, iimoto - awukwazi ukubala inani lezinto ozifumanekayo. IMathematika kulula ukuyifundisa xa ubheka zonke izinto ezibonakalayo ongazibala, ukongeza, ukususa nokuziphindaphinda.
Izinto zemihla ngemihla nazo zinokunceda ufundise umntwana wakho ukuba izinto akufanele zifanane nokuba zibalulekile kwizibalo. Ukubala iipulo kuyisifundo esikhulu sematriki, kodwa ukubala ii-apula, ii-orang kunye namakhabe kunye kunye nokwandisa inkqubo yakhe yokucinga.
Udibanisa ukubala kunye nezinto ezahlukeneyo kunokuba asebenze ngokusebenzisa umdlalo wenombolo ye-1, 2, 3.
3. Dlala iMidlalo yeMathe
Kukho ininzi yemidlalo kwimarike ethembisa ukukunceda ekufundiseni izibalo. UHo Ho Cherry-O kunye nokongeza i-dice ukufundisa ukulula okulula. I-Chutes kunye neLadders izisa abantwana kumanani 1 ukuya ku-100.
Iimidlalo zebhodi zeematriki eziphambili ziza kwaye zize ukhangele izitolo zeemidlalo ezitshisa namhlanje. Iiklasi ezifana ne- Yahtzee , i- PayDay , i- Life kunye ne- Monopoly zihlala zizincedo ezifanelekileyo zokudibanisa nokukhupha.
Ezinye zeemidlalo eziphezulu zeematriki zivela kwiingcinga zakho. Dlala umdlalo wokuzingela. Sebenzisa i-chaki kumanani abhaliweyo kwi-driveway kunye nemibuzo yezingane zakho kunye nemibuzo yezibalo kufuneka ziphendule ngokusebenza kwinombolo echanekileyo. Qalisa izakhono zokubala ezisisiseko kunye neebhloko. IMathematika ingaba ngumsebenzi abawuthandayo kunokuba i-drill education.
4. Bhaka ii Cookies
I-cookies ecocekileyo yenza izixhobo zokufundisa ezintle. Ngelixa unako ukubala ii-cookies ozibhakayo kwimathematika elula, i-batch entsha ibuye iphelele ekufundiseni amaqhezu.
Ngomese weplastiki, abantwana banokufunda indlela yokunquma ikhukhi kwii-8, ezine neyesine. Isenzo sokubukela sibone isine sesidalwa kunye nabo ukuba banqumle ukuba yonke into yesine yenza umqondo wengqondo yomntwana.
Sebenzisa loo maqhekeza amancinci ukuze umfundise indlela yokongeza nokukhupha amaqhezu. Umzekelo, 1/4 yekhukhi + 1/4 yekhukhi = 1/2 yekhukhi. Beka ndawonye amacandelo ukuze abone i-cookie isiqingatha.
Enye indlela yokubhaka ikhukhi kukusebenzisa inhlama yecookie eluhlaza okanye wenze intlama yakho yokudlala.
Ewe, awukwazi ukutya amaqhezu akho xa ugqibile ukufunda izibalo, kodwa unokusebenzisa kwakhona inhlama yecookie okanye udongwe lobumba.
5. Invest in a Abacus
Ngona nezandla ezincinci ziyakuthanda ukukhwela i-abacus ubuhlalu ngokuphindaphindiweyo kwintambo. I-abacus ingasetyenziselwa ukufundisa abantwana ukudibanisa, ukususa, ukuphindaphinda nokuhlukana.
Nge-abacus, abantwana bahlakulela izakhono zokulungisa iingxaki. Kukho ingcamango emva kokusebenzisa i-abacus ukuze uqiniseke ukuba uyazi ukuba yimaphi amaqela ombolo nganye yeebhondi emele imele ukuyisebenzisa ngokuchanekileyo.
6. Iimvavanyo zeeKlayidi zeFlash
Amakhadi eFlawu angakubonisa ukuba yiyiphi into e-2 + 2 elinganayo, kodwa ukuvumela abantwana ukuba bafumane amava ngokubala kunokusebenza kangcono. Hlola iimfuno zokufunda komntwana wakho ngokuzama zombini amakhadi amatshini kunye namava.
Abanye abantwana bafunda bhetele ngokubona impendulo kwikhadi okanye ukubala imifanekiso kwikhadi.
Abanye abayi kufumana ingqiqo yemathematika uze ubavumele ukuba babale izinto eziphathekayo. Hlanganisa izifundo zakho zezibalo ukuze ubone indlela ebonakala ngayo isebenza kakuhle kumntwana wakho.
7. Yenza iMathematika Yemihla ngemihla
Sebenzisa izibalo kwimisebenzi yakho yemihla ngemihla. Ncedisa umntwana wakho ukuba afumaneke kakhulu kwizifundo zakho zamatriki xa uzibandakanya ebomini bakho bemihla ngemihla ngelixa ubeka iinjongo anokufikelela kuzo ekufundeni.
Ekubomvu obomvu, ubona imoto emininzi eluhlaza?
Kwivenkile, zingaphi iibhokisi zabaculi esinokuzithengela ukuba sinayo i-$ 10 kuphela?
Kwiofisi yogqirha, zingaphi iintsana eziya kushiywa kwigumbi lokulinda xa abathathu bebizelwa emva?
Ukuba sasidla i-1/4 yesidlo sasemini, sasingakanani na?
Ziza kuba nexabiso elingakanani xa i-25% iphela?
Ngendlela yokuhamba, ingaba manani amanani kwiplani yelayisenisi phambi kwethu eyongezelela?
Zingaphi iikhati ozifaka kumashini wokuhlamba?
Ukuba ufuna ukwahlula iinqanaba ezisibhozo phakathi kwabantu abane kwi-arcade, zingaphi iindlwana umntu oza kuzifumana?
Emva kokuba umbonise ukuba imathematika enokuzonwabisa kangakanani, uya kufumana intshiseko malunga nokufunda unokufaka isicelo kwezinye izifundo. Emva kokuba ethanda ukufunda, akukho kummisa.
9 Iingcebiso zokubukela iWhale
Kutheni Ubudlelwane Bude Ubude Bunzima
IzeMpilo zePhysics Iingcebiso zabaSwitshi - Iziqulatho
Imfazwe Yehlabathi II: USS Iowa (BB-61)